उद्धार र राहत वितरणमा को–को शीर्ष नेता गए ? - Himalayan Kangaroo
Posted by Himalayan Kangaroo | २ भाद्र २०७४, शुक्रबार ०२:२३ |
काठमाडौं । अविरल वर्षासँगै आएको बाढी र डुबानले तराईमा ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति पुगेपछि सरकारी संयन्त्रसँगै राजनीतिक दलहरू पनि राहत र उद्धारमा जुटेका छन् ।
कांग्रेसले स्थानीय नेता तथा कार्यकर्तालाई बाढीपीडितको राहत र उद्धारमा खटिन अपिल गरेको छ । शीर्ष तहका नेताहरू भने आफैँ खटिएका छैनन् । प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सोमबार हेलिकोप्टरबाट तराईको डुबान प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन गरेर फर्किए । उनी गृहमन्त्रीसहित रौतहट, सुनसरी, इटहरी, सप्तरी पुगेर फर्किएका थिए । त्यहाँ उनले स्थानीय प्रशासनलाई पीडितलाई राहत विरतणमा कञ्जुस्याइँ नगर्न निर्देशन दिए ।
Previousस्वास्थ्य बीमा उपचार सेवा शुरु
Nextअष्ट्रेलियामा कामको लागि आकर्षक रिजुम कसरि तयार गर्ने ?
३१ बैशाख २०७५, सोमबार ०२:३०
यो कस्तो बदला ……….?
१२ बैशाख २०७२, शनिबार ०३:५१